नेकपाको विवादमा मध्यमार्गी समधान खोजिँदै | दर्पण दैनिक
प्रकाशित मिति: २०७६ फाल्गुन १७ गते ०८:५७
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सरकारका तर्फबाट कसलाई सिफारिस गर्ने भन्नेमा विवाद सुरु भएको थियो । विवादको सुरुआत निकै पहिला भएपनि यो प्रकरणपछि भने सतहमा देखिएको हो । ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको टकरावमा अन्य गुटमा हाबी हुँदा नेकपाभित्र ठूलो तरंग उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री रहेका केन्द्रीय सदस्य डा युवराज खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० गते राति १२ बजेबाट सकिँदैछ । सो स्थानमा प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन खोजेको छन् । तर, प्रचण्डसहितका नेताहरूले भने खतिवडाको ठाउँमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई पठाउन सचिवालयबाटै निर्णय गराइसकेका छन् । त्यो निर्णयपछि नेकपाको विवाद छताछुल्ल भएको हो ।
विगतमा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भएमात्र जान्छु भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका गौतमले पछिल्लो पटक विनासर्त जान तयार भएपछि ओली पक्ष संशकित भएको छ । केही व्यापारिक समूहको चलखेलमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई हटाउन सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको विश्लेषण ओली पक्षको रहेको छ । सोही व्यापारिक समूहले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई पनि फसाउन खोजेको बुझाइ सो पक्षको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले सदस्य सिफारिसको अधिकार सरकारलाई दिएकाले सोहीअनुसार गर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रचण्डलगायतका नेताहरूले भने पार्टीको निर्णय कार्यन्वयन गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
दुई समुहबीच चर्को टकराव देखिएपछि बिहीबारबाट मध्यमार्गी समधान निकाल्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । शुक्रबार बिहान प्रचण्ड निवास खुमलटारमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वर्षमान पुनलगायतका नेताहरूबिच छलफल भएको थियो । उनीहरूले अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिने तर, राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई लैजानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । पार्टीको निर्णय नमाने अप्ठेरो अवस्था आउने सक्ने संकेत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि सो बैठकबाट दिएका छन् । यद्यपि सो बैठकमा गौतम भने स्वास्थ्यका कारण अनुपस्थित रहेको बताइएको छ । गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने विषयमा भने सचिवालय सदस्य विष्णु पौडेलले पनि ओलीको साथ छाडेका छन् ।
जसका कारण प्रधानमन्त्री ओली सचिवालय बैठकमा अप्ठेरोमा परेका थिए । उनको पक्षमा ईश्वर पोखरेलमात्र रहेका छन् । अल्पमतमा भएपछि मौन समर्थनका बिच भएको निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने र गर्नै परे अर्को पटक गर्ने ओली पक्षको तयारी देखिएको छ । दुई पक्षको टकरावले पार्टीलाई नै क्षति हुने देखिएपछि चौथो वरीयताका वरिष्ठ नेता नेपाल सहमति जुटाउन लागेका छन् । उनले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग बालुवाटारमा भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा उनले मध्यमार्गी सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल बालुवाटार आइरहँदा चितवन पुगेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन सकिने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुने सिटमा भने गौतम नै जाने बताए । ‘अर्थमन्त्रीज्युको पदावधि सकिए पनि ६ महिनालाई प्रधानमन्त्रीज्युले उहाँलाई नै अर्थमन्त्री राख्न सक्ने हुनु भयो । त्यो प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा भयो । उहाँले के चाहनु हुन्छ भन्ने तर राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमजी नै जानु हुन्छ’, प्रचण्डको भनाइ छ । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवालयको निर्णय मान्नु नै पर्ने जिकिरसमेत गरे । ‘उपाध्यक्ष वामदेव गौतमजीलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु हुन्छ, मान्नै पर्छ । एक÷दुई दिनमा थाह पाइहाल्नु हुन्छ ।’
नेता नेपाल यही सन्देश लिएर बालुवाटार गएको स्रोतले बताएको छ । यद्यपी उनले बिहीबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा आफू पार्टीलाई विभाजनमा लैजान नदिने पक्षमा रहेकाले ढुक्क हुन आग्रह गरेका थिए । दुई अध्यक्ष आ–आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने संकेत देखिएपछि उनले नै मध्यमार्गी सुझाव दिएको बताइएको छ । यता, प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले राष्ट्रियसभामा एक जनाको नाम मनोनयनको विषय पार्टी आफैँले निर्णय गर्ने विषय नभएको बताए । उनले राष्ट्रियसभा सदस्यको लागि मनोनयनको विषय संविधानले गरेको व्याख्यानुसार पनि सरकार र राष्ट्रपतिबीचको विषय भएको सुनाए ।
उनले भने,‘सरकार र राष्ट्रपतिको विषय भए पनि पार्टीको सरकार भएको हुनाले पार्टीकै सुझाव दिने तहमा जुन प्रस्ताव गरेको छ, त्यो प्रस्ताव र अब अर्थमन्त्रीज्यू के हुनुहुन्छ? अर्थमन्त्रीको पनि कार्यकाल २० गते नै सकिँदैछ । अब यी दुई जनाको नाममा नै लडाइँ हुन्छ कि भनेर सारा मान्छेलाई लागेको छ । यो व्यवस्थापन गर्न नसकिने विषय नै छैन । यसको एकदमै उपयुक्त हिसाबले व्यवस्थापन हुन्छ । त्यसको रिजल्ट के हुन्छ ? मैले अहिले बोल्न हतारो हुन्छ । एक÷दुई दिन कुर्न म साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु । त्यसपछि तपाईंहरूले बुझ्नुहुन्छ ।’ यद्यपि उनले यो विषयमा पार्टीको निर्णय लागू नहुने जिकिर गरे । – सौर्य दैनिकबाट